Yakha Ubudlelwano Bamakhasimende Obusimeme nokuqukethwe kwekhwalithi | Martech Zone
Ucwaningo lwakamuva luthole lokho 66 amaphesenti yezindlela zokuthenga eziku-inthanethi zifaka ingxenye engokomzwelo. Abathengi bafuna ukuxhumana kwesikhathi eside, okomzwelo okungaphezu kokuthenga izinkinobho nezikhangiso ezihlosiwe. Bafuna ukuzizwa bejabule, bekhululekile noma bejabule lapho bethenga ku-inthanethi nomthengisi. Izinkampani kufanele ziguquke ukwenza lokhu kuxhumana okungokomzwelo namakhasimende futhi kusungulwe ukwethembeka kwesikhathi eside okunethonya ngaphezu kokuthenga okukodwa.
Thenga izinkinobho nezikhangiso eziphakanyisiwe ezinkundleni zokuxhumana zikhomba abathengi ngokususelwa kulwazi lomuntu siqu, njengomlando wokuthenga nokuphequlula. Ngenkathi izinkampani ziphoqa okuqukethwe okuhlobene nabathengi ngezindlela ezingafani, lezi zindlela zihlala zinciphisa ukusebenzisana kokuthengiselana (isb., “Ukunikezwa okuhamba phambili okulandelayo” ngokusekelwe kulokho osanda kukubuka ku-inthanethi), hhayi ubudlelwano. Abakhangisi badinga amathuluzi angcono okubandakanya okuzinzile. Ukuxoxa izindaba zomkhiqizo nokuqukethwe okwenziwe ngezifiso kunekhono lokufeza ubudlelwane obuhlala isikhathi eside ngokunika amandla imizwa ehlukanisiwe.
Ukukhuphuka kokuthengwa kwe-inthanethi nokwamaselula kunciphise izikhathi zokuxhumana kwabantu. Ukunikezwa kokuthengiselana oku-inthanethi kuvame ukukhombisa ukubekwa okungapheli, okuphindaphindayo kumasayithi ayintandokazi omthengi lapho enika amandla amakhukhi, eqhubekisela phambili amandla okucasula. Futhi noma ikuphi ukwenza okwakho okwenzeka ku-inthanethi kuvame ukuhlala esiteshini esisodwa (isb. Ukumaketha nge-imeyili) njengoba izinkampani zilwela ukuzuza ukuhweba “okungenamthungo” lapho lowo mthengi ewela iziteshi.
Ukuze kubekhona ithemba lokuzuza ukugqama kwe-omnichannel, kuyadingeka ukuthi amasu omkhiqizo aguqulwe ukuze anikeze umbono owodwa wokuqukethwe nokunikezwa komkhiqizo ezindaweni eziningi zokuthinta ezingatshela indaba engaguquguquki ngaso sonke isikhathi lapho umthengi ezibandakanya nomkhiqizo.
Amasu wokwenza kube ngokwakho
Uma kukhulunywa ngokwenza ngezifiso, ukucabanga kabusha okuqukethwe kwakho kokumaketha kuzo zonke iziteshi kuyisinyathelo sokuqala. Abakhangisi badinga ukunquma amanani nezinto ezibalulekile kuzethameli zabo ezihlosiwe futhi bashintshe okuqukethwe kanye nezindaba zezinhlamvu zomkhiqizo ngokufanele. Lokho amakhasimende akho akwazayo kufanele kuthinte kakhulu okuqukethwe okuphusha kuzo zonke iziteshi zokumaketha.
Isibonelo, uma izethameli zakho eziqondiwe zikwazisa ukusethwa kwethrendi nemfashini, kubalulekile ukuthi okuqukethwe kwakho kokumaketha (kusuka kuzincazelo zomkhiqizo kuya ezithombeni zangempela) kugcizelela izimfanelo zokudlulisa phambili zomkhiqizo. Lokhu kungasho nokuthi ugxila kuziteshi ezithile kunezinye. Leli qembu lingahle lazise abagqugquzeli bezindaba zenhlalo, ngokwesibonelo, ngakho-ke ukuhlanganisa okuqukethwe kwabezindaba okwenziwe ngumsebenzisi kungasiza lo mkhiqizo ukukhuthaza ukuxhumana okungokomzwelo nabathengi bawo.
Ikusasa lokuxoxa izindaba ngomkhiqizo lilele ekuhlanganiseni okuqukethwe neziteshi zezohwebo. Izinkampani ezixoxa indaba yesikhathi eside zingenza okungaphezulu kokukhuthaza ukuthenga. Bangaphinde babe nomthelela emibonweni yomphakathi futhi bathuthukise ubudlelwane ngokuvusa imizwa. Ukuxoxa izindaba ezilungile ngokusebenzisa amasu wokuqukethwe kungasebenza njengokuxhumana komuntu okudingeka kakhulu phakathi komkhiqizo namakhasimende ayo.
I-EnterWorks iwenza kanjani amasu la
EnterWorks ivumela abathengisi nemikhiqizo ukushayela ukuthengisa nokukhula komugqa ngokukholisa, okuhlangenwe nakho okuhlukanisiwe ngombono owodwa wokuqukethwe nabahlinzeki, ophathina, amakhasimende, nezimakethe.
Ipulatifomu isebenza ngokuhlanganisa idatha yomkhiqizo kusuka emithonjeni yangaphakathi neyabahlinzeki (amaspredishithi, izingosi zabaphakeli, izizinda zokugcina imininingwane emuva, izithombe noma amavidiyo) ngohlelo oluphakathi oluhlanza futhi luqinisekise yonke idatha. I-master database evelayo inika amandla ukudala okuqukethwe okuhlanganyelwe okungasetshenziswa kuzo zonke iziteshi zokumaketha ezidijithali nezingokoqobo ezivela kumawebhusayithi nakuzinhlelo zokusebenza zeselula eziya kuzincwadi kanye nokuphrinta imeyili.
Ngokuqondile, ipulatifomu yokuphathwa kwedatha yakwa-EnterWorks ifaka:
Ukuphathwa Kwe-Master Data: Guqula izizinda zomkhiqizo, ikhasimende, umkhiqizo, indawo nedivayisi ukuze unike amandla imikhankaso yakho ukuletha ukukhomba okunezici eziningi.
Ukuphathwa Kwemininingwane Yomkhiqizo: Dala futhi ucebise idatha yomkhiqizo nokuqukethwe ngokuya ngezindawo zomzimba namaphoyinti okuthinta wedijithali wokulethwa kokuqukethwe okungenamthungo.
Ukumodeliswa KweDynamic Data: Qondanisa noma unwebise amamodeli wedatha nokuqukethwe ukuze uhlukanise ukunikezwa kwemikhiqizo njengoba imodeli yebhizinisi iguquka ibe izingxenye ezintsha nezimakethe ezintsha
Ukuphathwa kwedatha nokuqukethwe kubaluleke kakhulu ekwakheni ubudlelwano namakhasimende. Kepha ukwenza kahle, amabhizinisi kufanele atshale imali kungxenyekazi eyindida eqondanisa idatha nokuqukethwe kuzingxenyekazi eziningi ukuthonya izethameli eziqondiwe. Lapho ama-brand ekwazi ukuxoxa indaba yenkampani engaguquguquki evusa imizwa efanele phakathi kwamakhasimende, azokwakha ukuxhumana okujulile futhi ekugcineni akhuthaze ukwethembeka kwesikhathi eside.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweukumodeliswa kwedatha okunamandlaukungenaukuphathwa kwemininingwane yokufundaamasu okwenza ngezifisookuqukethwe okwenziwe ngezifisopinukuphathwa kolwazi lomkhiqizoukuzibandakanya okusimeme